Maitiro ekuvanza kunyorera mune isingaonekwe dhairekodhi | IPhone nhau
Maitiro ekuvanza maapplication mune isingaonekwe folda isina jailbreak
Une maapplication kana mapfupi ausingade kuti chero munhu aone? Ini ndiri kunyanya kufarira kusarega chero munhu achibata yangu iPhone asi, kana iwe wakasiyana neni uye uine mamwe mafomu ausingade kuti chero munhu azive iwe unayo, unogona kuviga iwo mune isingaonekwe dhairekitori, uye kupfuura zvese, it hazvidiwe kuti yako iPhone, iPod kana iPad ine jailbroken. Iwe unofanirwa kupira zvishoma zveaesthetics nekuchinja iyo Wallpaper, asi hazvigone kuve zvese. Tevere tinokuratidza maitiro ekugadzira iyi folda isingaonekwe.
1 Maitiro ekuvanza maapplication mune isingaonekwe folda
1.1 Isu tinoshandura iyo Wallpaper
1.2 Isu tinoshandura kujekesa
1.3 Isu tinogadzira icon isingaonekwe
1.4 Isu tinotumidza iyo folda ine zita risina chinhu.
1.5 Gadzira faira risingaoneki
Maitiro ekuvanza maapplication mune isingaonekwe folda
Uku kunyengera kunouya kwatiri kubva Gadget Hacks uye iwe unogona kuona mhedzisiro muvhidhiyo inotevera. Mushure mevhidhiyo une matanho ekutevera.
Isu tinoshandura iyo Wallpaper
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kushandisa Wallpaper iyo iyo folda isingagoni kusiyaniswa. Iko kumashure kwekuchinja kuri iyo chete iri pachiratidziro chemumba, saka tinogona kusiya chifananidzo chatinoda pane yekuvhara skrini. Tichashandisa imwe yemari inotevera:
Tevere, isu tinoenda kuZvirongwa / Wallpaper / Sarudza imwe kumashure, isu tinoenda kuReel uye sarudza imwe yeayo maviri ataive tatora pasi.
Isu tinoshandura kujekesa
Chinhu chinotevera chatinofanira kuita kuenda kuZvirongwa / General / Kuwanika / Wedzera musiyano. Kana isu tiri kushandisa iyo grey kumashure, isu tinofanirwa kudzora pachena. Kana isu tikashandisa iyo chena kumashure, isu tinongofanirwa kumisa sarudzo.
Isu tinogadzira icon isingaonekwe
Kugadzira icon isingaonekwe isu tinoda iyo Yemahara Icons App application iwe yaunogona kuwana kubva kune yapfuura link Kugadzira icon isingaonekwe tichaita zvinotevera:
Tinobaya Gadzira icon.
Isu tinobata Enda kunobatanidza.
Isu tinosarudza iyo Photo sarudzo.
Isu takasarudza iyo kumashure yataive takaisa sepashure peiyo skrini yekumba uye takabaya Use.
Pamusoro ichatikumbira kuti tiise URL; tinobata space bar.
Tinobaya Kuisa uyezve paIsa.
Iko kunyorera kuchatitumira kuSafari. Isu tinongofanirwa kuwedzera chinongedzo kuchikona chekumba.
Tinotumidza zita rekubatanidza nepfungwa uye tinya pa Wedzera. Tichava nechiratidzo chisingaoneki pachikona chemusha.
Isu tinotumidza iyo folda ine zita risina chinhu.
Kudzima zita refaira, chete ngatiteedzere nzvimbo isina chinhu chii chiri pakati pemabhuraketi aya [⠀⠀⠀⠀⠀⠀] uye unamate kana uchidoma zita dura.
Gadzira faira risingaoneki
Chinhu chekupedzisira chatinofanirwa kuita kuisa chinongedzo icho chatakasika pachiratidziro chemumba mufaira ratakasika. Mu peji rekumberi kubva mudanga chinongofanirwa kuve chiratidzo chisingaonekwe uye zvese zvatinoda kuvanza isu tichaisa kubva kune rechipiri peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvanza maapplication mune isingaonekwe folda isina jailbreak
Ndihwo Uber hwangu here? Hapasisinazve nyonganiso, nema LED matsva mumotokari
Temple Run 2 inowedzera Frozen Shadows yekuwedzera